Delta Air Lines sy LATAM handefa codeshare any Kolombia, Ekoatera ary Peroa
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Delta Air Lines sy LATAM handefa codeshare any Kolombia, Ekoatera ary Peroa
Delta Air-dalana, ary ny LATAM dia handefa codeshare ho an'ny sidina ampiasain'ny sasany amin'ireo mpiara-miasa LATAM any Kolombia, Ekoatera ary Peroa manomboka amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2020, mandra-pahatongan'ny fahazoana ny fankatoavan'ny governemanta mihatra.
Ny codeshare dia hanome ny mpanjifa fitomboan'ny fifandraisana eo amin'ny 74 ka hatrany amin'ny toeran-tany Etazonia ary hatrany amin'ny 51 ny tanjona mankany Amerika atsimo.
Manantena ny Delta hanitatra ny fahafaha-manao codeshare hampidirina toerana maro kokoa atsy ho atsy. Ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia miasa ihany koa amin'ny fampidirana ny fifandimbiasan'ny programa flyer matetika sy ny fidirana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
"Ity dia dingana lehibe iray ho an'ny mpanjifa rehefa manomboka manatanteraka ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny Delta sy ny LATAM izay nambara tamin'ny fiandohan'ity taona ity," hoy i Steve Sear, filoha Delta - filoha lefitra iraisam-pirenena sy mpanatanteraka - Global Sales. "Raha vantany vao tanteraka tanteraka, ity fiaraha-miasa ity dia hanome antsika fahafaha-manolotra ny mpanjifantsika nizara tambajotra mitarika indostrialy sy serivisy ambony manerana an'i Amerika."
Tamin'ny volana septambra, Delta sy LATAM dia nanambara fifanarahana izay hampivondrona ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana avaratra sy atsimo, izay nampiharina tanteraka dia hanolotra safidy fivezivezena be dia be ho an'ireo mpanjifa manana fidirana amin'ireo toerana 435 manerantany. Ny fiaraha-miasa nohatsaraina dia miankina amin'ny fankatoavan'ny governemanta sy ny lalàna.
Ny DHS dia mila fanamarinana tsy maintsy jerena amin'ny seranam-piaramanidina ho an'ny Amerikanina rehetra
SB Architects mankalaza bisikileta mahomby mba hanantena tsingerina sy taona hanome